July 2021 - Top Nepal News
Posted on July 31, 2021 by topnepal_admin
काठमाडौ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल जस्ता नेताहरुका लागि पार्टीमा ठाउँ नभएको बताउनुभएको छ । आज नेकपा एमालेको काठमाडौं जिल्ला कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले वामपन्थीको सरकार ढाल्ने र दक्षिणपन्थीको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै उहाँले माधव नेपालका लागि पार्टीमा ठाउँ नभएको बताउनुभएको हो । पार्टीमा बाटो बिराउनेहरुका कारण ठूलो क्षति भएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले गलत काम गर्ने मुख्य , मुख्य बाहेक अरु भने पार्टीमा फर्किन सक्ने बताउनुभयो । तर पार्टी एकताका नाममा धेरै कुर्न नसकिने अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ । अध्यक्ष ओलीले आगामी चुनावमा पार्टीले बहुमत ल्याउने दावी गर्दै पार्टीमा खुट्टा तान्नेहरु कोही नभएको र अब सजिलै बहुमत ल्याउन सकिने बताउनुभयो ।
Posted in UncategorizedLeaveaComment on माधव नेपालको लागी एमालेमा ठाँउ छैन : अध्यक्ष केपी शर्मा
Posted on July 16, 2021 July 16, 2021 by topnepal_admin
काठमाडौ । राष्ट्रपति कार्यालयले नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको शपथ ग्रहण सर्वोच्च अदालतबाटै गर्न पत्राचार गरिएको बताएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गरी त्यसका लागि २०७८ वैशाख ५ गते पत्राचार गरिएको जानकारी दिएको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छः ‘कोभिड १९ महामारीलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा हुनुपर्ने भनी व्यवस्था भएकोमा बाहेक प्रधानन्यायाधीश ज्युबाट ग्रहण गराउने पदाधिकारीको शपथ ग्रहण सर्वोच्च अदालतबाटै आयोजना हुने व्यवस्थाका लागि मिति २०७८–०१–५ गते पत्रचार गरिएको हो ।’
विज्ञिप्तमा राष्ट्रपतिको समुपस्थितिमा शपथ ग्रहण हुनुपर्ने भनी व्यवस्था भएका बाहेक उक्त मिति पश्चात नियुक्ति भएका अन्य संवैधानिक अङ्ग लगायतका पदाधिकारीहरूको शपथ ग्रहण सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीबाट हुँदै आएको समेत स्पष्ट पारिएको छ ।
सपथ कार्यक्रम राष्ट्रपतिको कार्यालयमा नभएको भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित–प्रसारित समाचारप्रति समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । नवनियुक्त महान्याधिवक्ता खातीले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा शपथ लिएका थिए ।
Posted in UncategorizedTagged राष्ट्रपतिLeaveaComment on राष्ट्रपतिको दम्भ : ‘महान्यायाधिवक्ताको शपथ सर्वोच्चबाटै गराए हुन्छ’
Posted on July 8, 2021 by topnepal_admin
काठमाडौ । काठमाडौ । नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९­) संक्रमितको संख्या उकालो लागेको छ । कोरोनाको दोस्रो लहर पिकमा पुगेर क्रमशः ओरालो लागिरहेकै समयमा दैनिक पहिचान हुने नयाँ संक्रमितको संख्या बढ्नु चिन्ताको विषय भएको जनस्वास्थ्यविद्हरु बताउँछन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार दोस्रो लहर उत्कर्षमा पुग्दा वैशाख २८ गते एकैदिन ९,४८३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । सो दिन २१ हजार ३१६ नमुना परीक्षण भएको थियो । यसरी हेर्दा संक्रमण दर ४४.४९ प्रतिशत हो, जुन दोस्रो लहरकै उच्च हो ।
त्यसयता संख्यात्मक हिसाबले केही तलमाथि हुँदै संक्रमण विस्तारै ओरोलो लाग्यो र २० असारमा आइपुग्दा १,६०३ जना मात्र नयाँ संक्रमित थपिए । यो संख्या दोस्रो लहर उत्कर्षमा पुगेर ओरालो झर्ने संक्रमितको सबैभन्दा कम थियो ।
‘सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएपछि जनताले पनि कोरोना गयो भन्ने सोच्छन् । जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा लापरबाही हुन जान्छ । त्यसको परिणाम स्वरुप संक्रमण बढ्न जान्छ । पछिल्लो तीन दिन यता संक्रमण बढ्नु पनि त्यसैको परिणाम हुन सक्छ’ संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. जनक कोइराला भन्छन् ।
तर पछिल्लो तीन दिनयता कोरोना संक्रमितको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ । असार २१ गते २,६२२ कोरोना संक्रमित थपिँदा त्यसको भोलिपल्ट २२ गते २,६३४ मा संक्रमण पुष्टि भयो । बुधबार नयाँ संक्रमितको संख्या २,९७९ पुगेको छ ।
संक्रमण बढ्नु तेस्रो लहरको संकेत हो ?
संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. जनक कोइरालाका अनुसार दोस्रो लहर सकिएकै थिएन । जोखिम कायमै थियो । त्यही समयमा निषेधाज्ञा खुकुलो बन्दा संक्रमण बढेको हुनसक्छ । पहिलो लहरमा पनि निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएको केही समय संक्रमण बढेपनि पछि घटेको भन्दै उनले भने, ‘सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएपछि जनताले पनि कोरोना गयो भन्ने सोच्छन् । जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा लापरबाही हुन जान्छ । त्यसको परिणाम स्वरुप संक्रमण बढ्न जान्छ । पछिल्लो तीन दिन यता संक्रमण बढ्नु पनि त्यसैको परिणाम हुन सक्छ ।’
यही आधारमा संक्रमण बढ्दै गएर फेरि ८/९ हजार पुग्यो भने त्यसलाई तेस्रो लहर भन्न सकिने उनी बताउँछन् । त्यसैले संक्रमण घट्ने वा बढ्ने आधार एक दुई हप्तापछिको तथ्यांकलाई विश्लेषण गरेर मात्रै भन्न सकिने उनी बताउँछन् । नेपालमा तेस्रो लहर आउनका लागि डेल्टाबाहेकको नयाँ भेरियन्ट देखिनु पर्ने उनको तर्क छ ।
अर्का संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. प्रभात अधिकारी संक्रमण बढ्नुलाई दोस्रो लहरकै निरन्तरता भएको बताउँछन् । ‘डेल्टा भेरियन्ट बढी संक्रामक पनि छ । पछिल्लो केही दिनयता चहलपहल पनि बढेको छ । यसले संक्रमण बढेको हुनसक्छ’ उनले भने ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण पौडेल पनि देशभर पीसीआर विधिबाट संक्रमित पत्ता लाग्ने दर फेरि बढेको बताउँछन् । नियमित प्रेस ब्रिफिङमा डा. पौडेलले भने, ‘पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणमा संक्रमण दर २५ प्रतिशतभन्दा कम थियो । तर आज संक्रमण दर २६.५ प्रतिशत पुगेको छ ।’
धेरै जिल्लामा निषेधाज्ञाका प्रावधानहरु खुलेकका कारण पनि संक्रमण बढेको हुन सक्ने उनी बताउँछन् । ‘संक्रमणको जोखिम कायमै छ । सार्वजनिक सवारीका साधन गुडे पनि, सरकारी कार्यालय लगायत अन्य सेवा सञ्चालनमा आएपनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न नभुलौं’ डा. पौडेलले भने ।
डा. पौडेलका अनुसार ५ सय भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्ला अझै पनि ९ वटा छन् । पछिल्लो समय कर्णाली र गण्डकी प्रदेश संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको उनले बताए । डा. पौडेलका अनुसार कर्णालीमा संक्रमण दर ५० र गण्डकीमा ३९.५ प्रतिशत छ ।
Posted in UncategorizedLeaveaComment on कोरोना संक्रमण फेरि उकालो लाग्दै